मिडनाइट हट | मेरो खेस्रा whatever i feel
नागरिक दैनिकको “अक्षर”मा प्रकाशित मेरो कथा
“सुब्बासाबलाई आज सञ्चो छैन कि क्या हो? अनुहार मलीनो देख्छु नि”
“हैन, ठीकै छ, त्यस्तो केही हैन।”
“क्या फिगर हुन्छ यार तिनीहरुको।”
“कुनैकुनैले त यार माथि केही पनि लगाएका हुँदैनन्।”
“कति पैसा कमाउँछन् होला हगि तिनीहरुले?”
“बाहिर हिंडडुल गर्न अप्ठ्यारो लाग्दैन होला तिनीहरुलाई भन्या।”
उनका सहकर्मीहरु मध्ये एक जना नारदजी कार्यालयको मर्दमा गनिन्थे। उनी यो मामिलामा पोख्त भएका हुनाले र धेरै महिलाहरुसंगको उनको निकटताका कारण अरु साथीहरु आफ्ना त्यसकिसिमका समस्याका समाधानका लागि नारदजीको भर पर्थे। नारदजीसंग यसकिसिमका हरेक समस्याको समाधान हुने गर्थे। बिस्तारै सुब्बासाबले पनि नारदजीसंग हेमचेम बढाउन थालेका थिए। त्यसैको फलस्वरुप काठमाण्डौको रात्रिकालीन जीवनसंग उनी परिचित पनि हुन पुगेका थिए। ४९ वर्षको उमेरमा उनले पहिलो पटक सम्पूर्ण नग्न नारी शरीर, त्यो पनि झलमल्ल उज्यालोमा नृत्य गरिरहेको हेरेका थिए। आफ्नै श्रीमतीलाई समेत त्यो रुपमा नदेखेका सुब्बासाब रोमाञ्चित भएका थिए। नारदजीसंग अलि पहिले नै मित्रता कायमगर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि लागेको थियो। अनि त्यही मित्रताका प्रगाढताका कारण आज उनी नारदजीसंग धापासी पछाडि कतै विशेष ठाउँमा जाने भएका थिए।
“दाई भोलि, पर्सी र निपर्सी त पसल खुल्दैन है”
अनुभव नगरि के थाहा हुन्छ र? त्यसपछि कहिले कति कसरी भन्ने कुरा निर्क्यौल गरौंला।
धारामा उनको पालो आउनै लागेको थियो। चियाको पैसा तिरेर उनी त्यता लागे। दुइ बाल्टिन पानी दुइतिर झुण्डाएर एउटा गीत गुन्गुनाउँदै उनी डेरामा पुगे। ग्यासमा दुइटै बर्नर बालेर पानी तताउन हालेर उनी आजको साँझ कस्तो हुने होला भनेर कल्पना गर्न थाले। पहिले केही कुराकानी त गर्नुपर्ला नि, जनावर जस्तो जाइलाग्न त हुँदैन होला। तर के कुरा गर्नु चिन्नु न जान्नुको मान्छेसंग। हुन त मेरो लागि पो यो नयाँ कुरा, उसका लागि त हैन नि। के कसरी भन्ने कुरा आफै भैहाल्छ होला नि। उनी अझै कल्पना गर्न थाले। तन्नाले छोपिएर घुसि्रनुपर्छ होला कि त्यत्तिकै नै पनि……। बत्ती निभाएर अँध्यारो बनाउनु त पर्दैन होला नि। उनकी श्रीमतीले त अँध्यारो नभै केही पनि मान्दिनथिई। अनि लुगा पनि खोल्न मान्दैन थिई। यसले त मान्छे होला नि। आफै खोल्छे कि खोलिदिनुपर्छ होला? अनि अँग्रेजी फिल्महरुमा जस्तो आफै गर्ली त? नत्र के भनेर भन्ने त्यसो गर्नलाई।
आगोमा बसालेको पानीमा त बल्ल काँडा उम्रने सुरसार गर्दै थियो तर सुब्बासाब भने भुकभुक उम्लिसकेका थिए। उनी जुरुक्क उठेर बाथरुम तिर गए। तर बाथरुम खालि थिएन। अनि अर्को डेरावाल पहिले नै पालो कुरिरहेको थियो। उनी कोठामा आए र झ्यालको पर्दा डम्म बन्द गरे। पानी तात्न केही नभए पनि २० मिनेट त बाँकी नै थियो।
“के हो सुब्बासाब आज त बेहुला जस्तो गजबसंग ठाँटिनुभएको छ, पार्टीसार्टी छ कि क्या हो?”
उनी मुस्काएर मात्र आफ्नो टेबलतिर लागे। नारदजीको टेबल खालि थियो। यतिबेलासम्म किन आएन नारद भनेर उनलाई अचम्म लाग्यो। बज्ज्या बिरामीसिरामी त परेन आजै? कि बिर्स्यो उसले? हैन हैन किन बिर्सन्थ्यो र? बोलीको कुरामा नारदजी पक्का मान्छे हो, जिम्मेवार छ। टरुाफिक जाममा परेको होला। एघारै मात्र त बजेको छ, अफीस आउने समय त हुँदैछ नि। उनलाई साह्रै चुरोटको तलतल लाग्यो। आ…..होस्, तानिदिन्छु एउटा। तीन चार बजेपछि नखाउँला बरु, अनि चुइंगगम चपाउँला जानेबेलामा। त्यसमाथि पनि अहिलेसम्म श्रीमतीको नजीक जाँदा यति कुरा सोचेको छैन जिन्दगीमा, त्यो मेरी को हो र?
“तयार हैन त सुब्बासाब शिकार खेल्न जान?”
“खोल नहेर्नुस् सुब्बासाब, गुदी हेर्नुस् गुदी। ओखरको बाहिर हेर्दा भित्र त्यति मीठो खानेकुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ?”
“सर त धेरै दिनपछि पो आउनुभो, म त हामीलाई बिर्सनुभयो कि भन्ठान्या।”
“कहाँ बिर्सनु र तपाईंहरुलाई। अलि बेफुर्सदी भएर मात्र हो। मैले फोनमा भन्या साथी उहाँ नै हो, हाम्रो सुब्बासाब।”
“अनि नानीहरु को को छन् त?”
“अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, आफ्नै घर हो, को संग बस्ने हो भित्र जानुभए हुन्छ।”
सुब्बासाब अलमल परे। उनले सोचे जस्तो कोही पनि थिएनन्। तर अब यहाँसम्म आइसकेपछि त्यसै फर्कन पनि उनलाई मन लागेन। फेरि यहाँबाट कोमलताको कुरा के थाहा हुन्छ र, चिया पसल्नीको हात त्यस्तो मुलायम होला भन्न्ो कुरा छुनु अघि थाहा भएको थियो र? नारदजीले भनेजस्तै गुदी पो हेर्ने त। लामो सास फेरेर उनले ती मध्ये सबैभन्दा तरुनी जस्ती देखिने एकजनालाई हेर्दै भने,
“यिनको नाम के हो कुन्नि।”
“तपाईंलाई जे मन लाग्छ त्यही नामले बोलाए हुन्छ। हिंड्नुस् भित्रै गएर कुरा गरौंला।”
“शुरुशुरुमा यस्तै हो सुब्बासाब, ह्याकुलाले मिचेर जानुस्,बिस्तारै बानी पर्छ।”
“म एकैछिनमा आएँ है?”
“के भो सुब्बासाब? कहाँ जान लाग्नुभाको?”
नसुने झैं तल निस्केर कतै नहेरि उनी लम्कँदै चोकको टेम्पो पार्कमा पुगेर एउटा टेम्पोमा बसे। उनको मनमा अनेकांै कुराहरु खेलिरहेका थिए। भोलि नारदजीसंग के भन्ने हो उनलाई थाहा थिएन। शायद नारदजीले सबैलाई उनको नामर्दीपनको कथा सुनाएर उपहासको पात्र बनाउन सक्छन्। त्यही सोचमा उनले कुन बेला एउटी युवती आएर उनको छेउको खालि सीटमा बसिन् भन्ने पनि थाहा पाएनन्। टेम्पो चल्न थालेपछि तिनले लगाएको मधुरो अत्तरको बास्नाले मात्र उनी तन्द्रामुक्त भए।
“भाडा दिनुस् भाडा।”
केटो तिनको फर्ता पैसा दिएर सुब्बासाब तिर उन्मुख भयो। सुब्बासाबले पचासको नोट बढाउँदै भने,
उनलाई ओर्लनु त खास आधा बाटो यतै चाबेलमा थियो।
त्यो अनुहार मधुमेहले चाउरिएकी उनकी श्रीमतीको अनुहार थियो। सुब्बासाबले झसंग भएर आँखा खोले,
« ठग्ने र ठगिनेहरू
3 thoughts on “मिडनाइट हट”
साच्चैं मिठो अनि रोचक कथा पढाउनु भयो
यस्तो लाग्यो ति सुब्बा सा’ब कतै मै त हैन
तपाइको कथाले त पाठकलाई कथा भित्रै बांधिरख्छ
धन्यबाद मिड नाईटहट्को लागि
पढ्न त अक्षर मै पनि पढिएको थियो, आज फेरी पढियो । निकै गज्जब को छ ‘मिडनाइट-हट’ !
मान्छेको सोचाई न हो के के सोचिन्छ अनि के के भै दिन्छ |